ွှWhen2become 1….(၂ ယောက် ၁စိတ် ဖြစ်လာတဲ့ အခါ) | Cornfields to Copenhagen
ွှWhen2become 1….(၂ ယောက် ၁စိတ် ဖြစ်လာတဲ့ အခါ)
Following is the translation of my October 13th post on the two senator’s proposal in Myanmar.
Senator ၂ ယောက်ရဲ့ယုံကြည်ချက်
မနေ့ ကတော့ Massachusetts က Democratic Senator, John Kerry နဲ့South Carolina Republican Senator Landay Graham တို့ ကသူတို့ ရဲ့ မဆုတ်မနစ်တဲ့ခံယူချက်တွေကို တင်ပြပြီး Climate Change Legislation ကို ထောက်ခံကြဖို့ ပြောသွားကြပြန်ပါတယ်….
Democrats တွေက နိုင်ငံအတွင်း CO2 emission လျှော့ချဖို့ ကို ခက်ခဲ တဲ့ Target တွေ သတ်မှတ်ပါတယ်။
Republican တွေက အမေရိကန်အနေနဲ့လောင်စာဆီအတွက် တခြားနိုင်ငံတွေအပေါ် မမှီခိုပဲရပ်တည်နိုင်ပါ့မလား ဆိုတာနဲ့ ဒီ Bill ရဲ့နောက်ဆက်တွဲရလဒ်တွေကို သံသယ ရှိပါတယ်။
ဘာဖြစ်လို့ဒီ Bill ကို Vote လုပ် သုင့်လဲ
၁။ Climate Change ဆိုတာ ယုံတမ်းပုံ ပြင်မဟုတ်ပါဘူး။ နိုင်ငံတော် နဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ လုံခြုံရေး ကို အဟုတ်အမှန်ခြိမ်းခြောက် နေတာပါ။
ဒီ Bill က့ Cap n Trade လို Market Based System ကို ကျင့့်သုံးမှာ မို့ လို့ 
နိင်ငံ တွင်း အကြီးမားဆုံး CO2 Emitter တွေဖြစ်တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမထိခိုက်စေသလို နိုင်ငံရပ်ခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုပေါ်ပေါက်စေမှာပါ။
၂။ အမေရိကန်အနေနဲ့လောင်စာဆီအစားထိ့း တဲ့ နေရာမှာ လေစွမ်းအင် နဲ့ နေစွမ်းအင်ကို အလေးထားသင့်ပေမဲ့Nuclear စွမ်းအင်ကိုလဲ ပစ်ပယ်လို့ မရပါဘူး။
ဒီ Bill က Nuclear Power Plant တွေ ဆောက်ရာမှာအခက်အခဲ ဖြစ်စေတဲ့ရှုပ်ထွေးပွေလီတဲ့ သတ်မှတ်ချက်တွေကို လျှော့ချပေးမှာ ဖြစ်သလို Safe Nuclear Waste Disposal အတွက် သုတေသနလုပ်ငန်းတွေမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပေးမှာပါ။
၃။ ဒီလို သာ ကိုယ်အားကိုယ်ကိုးနိုင်မယ်ဆိုရင် အမေရိကန်ဟာ Saudi Arabia of Clean Coal မလွဲဖြစ်လာမှာပါ။
ဒီ Bill ကနိုင်ငံ ရဲ့ On shore, Off shore ရေနံတူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းတွေကို အားပေးမှာဖြစ်သလို Safe Carbon Disposal နည်းပညာ တွေကိုလည်း မြေတောင်မြှောက်ပေးသွားမှာပါ။
၄။ တစ်နေ့တစ်နေ့ ကို တခြားနိုင်ငံတွေကိုလောင်စာဆီအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း ၈၀၀ လောက် ပေးနေရတာ ကောင်းတဲ့ အလားအလာမဟုတ်ပါဘူး။
ဒီ Bill အတိုင်း လိုက်နာမယ်ဆို ရင် ယာယီဆိုးကျိုးနဲနဲပါးပါးတော့ရှိမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ရေရှည် ကောင်းကျိုးတွေကတော့ ပြောမဆုံးပေါင် တောသုံးတောင်ပါပဲ။
၅။ အခု Congress အနေနဲ့ ဒီ Bill ကို မထောက်ခံဘူးဆိုရင် Environmental Protection Agency က ဒီထက်ပိုပြင်းထန်တဲ့ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကို အားမပေးတဲ့ဥပဒေ တွေကိုချမှတ်တော့မှာပါ။
ဒါကြောင့် Democrat တွေနဲ့Republican တွေသာ စည်းစည်းလုံးလုံး တစ်စိတ်တစ်ဝမ်းတည်း ထောက်ခံလိုက်မယ်ဆိုရင် အမေရိကန် အနေနဲ့ ပြန်လည်ဦးမော့လာပြီး အခုလာမဲ့Copehagen ညီလာခံမှာလဲနိုင်ငံတကာနဲ့ အတူ ပိုပြီးသာယာလှပတဲ့ နောင်လာနောက်သားတွေအတွက် လုံခြုံအေးချမ်းတဲ့ ကမ်ဘာ ကြီးဆီကိုချီတက်နိုင်မှာပါ။
← The South Center Meeting on9Oct 2009
ွှWhen2become 1….(Senator ၂ ယောက်ရဲ့ယုံကြည်ချက်) →